Mampiseho làlana amin'ny Google Map miaraka amin'ny KML | Martech Zone
Talata, Martsa 18, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ity dia ampahany amin'ny Fizarana 2 amin'ny fanehoana làlana (fizarana tsipika) ao amin'ny Sarintany.
Tamin'ny taon-dasa dia nanampy ny Làlan'ny kolontsaina Indianapolis amin'ny alàlan'ny fandefasana an-tsarintany ny bisikileta sy làlan-kaleha tsy mampino izay amboarina ao Indianapolis amin'ny alàlan'ny Google Earth. Ny fizarana 1 dia ny fomba fampiasana Google Earth handrafetana ny làlanao ary manondrana azy ireo any a Fisie KML.
Anio hariva dia nandefa sarintany izay nipetraka tao amin'ny lahatahiry fitsapana nataoko ihany aho tamin'ny farany Iana manosika hatrany amin'ny Làlana ara-kolontsaina Indy toerana. Io dia hahafahan'ny mpitsidika manatona, miova amin'ny fijerena zanabolana, ary mifanerasera amin'ny sari-tany mihoatra ny sary tsy miova.
Nanampy ny fahamaimaizako tamin'ny nahavitana an'ity izay niresahako tamin'i Gail Swanstrom sy Brian Payne (Filoha, Fondation Community Community Indiana Afovoany) ny sabotsy aorian'ny hetsika Bill McKibben. Gail sy Brian dia samy olona tsy mampino - tsara fanahy, feno tanjaka ary manam-paharetana tokoa. Tsy afaka nandiso azy ireo aho.
Tetikasa iray nidina! Mbola vitsivitsy sisa! Rehefa apetraka ny sari-tany dia havaoziko amin'ny rohy ity lahatsoratra ity.
Tags: geocodegeolocationGoogle MapsKMLfisie kmlPath
Mar 19, 2008 amin'ny 11: 02 AM
Lahatsoratra mahafinaritra. Miasa amin'ny karazana serivisy "mpitady lalana tsara indrindra" aho miaraka amin'ny toerana fivarotana/fisakafoanana/sns mba hanampiana ny mpamily hahita ny lalana tsara indrindra sy ny fiatoana tsara indrindra amin'izany lalana izany. Mazava ho azy fa mifototra amin'ny Google Maps izy io, noho izany dia toy ny Fanomezana Fahalalana lehibe ho ahy ity lahatsoratra ity 🙂 Ara-potoana 🙂
Asa tsara. Misaotra.
Mivantana ny Sarintanin'ny kolontsaina Indianapolis!